Xasan Shiikh oo Kismaayo kula kulmay xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee Jubbaland laga soo doortay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaJubalandXasan Shiikh oo Kismaayo kula kulmay xildhibaanada aqalka hoose iyo aqalka sare ee Jubbaland laga soo doortay
December 7, 2016 Puntland Mirror Jubaland, Somalia 0
Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud. [Sawirka: Archive]
Kismaayo-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud ayaa magaalada Kismaayo kula kulmay xildhibaanda aqalka hoose iyo aqalka sare ee Jubbaland laga soo doortay.
Xasan Shiikh Maxamuud ayaa u soo bandhigay xildhibaanada qorshihiisa afarta sanno ee soo socota haddii dib loo doorto.
Madaxweynaha hadda xilka haya ayaa u taagan doorashada madaxtinimada Soomaaliya mar labaad.
January 7, 2017 Ciidamada maamulka Jubbaland oo dib u la wareegay degmada Buulo-guduud
Puntland forces recapture Qandala coastal town from ISIS
Mogadishu-(Puntland Mirror) Somalia’s federal ministry of women has held a meeting in Mogadishu on Monday which is focused how the Somali women participate the country’s political and decision making processes in the elections of 2016. [...]